ကော့ပငန်းကျွန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤ ဆောင်းပါးသည် စိစစ်အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် နောက်ထပ်ကိုးကားချက်များ လိုအပ်နေသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရင်းမြစ်များ ကိုးကားထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဤဆောင်းပါးကို ပြည့်စုံတိုးတက်လာအောင် ကူညီပေးပါ။ အကိုးအကားရင်းမြစ် မပါရှိသော အကြောင်းအရာများသည် စိန်ခေါ်ခြင်းခံရပြီး ဖယ်ရှားခံရနိုင်သည်။ (March 2018)
ကော့ပငန်း (ထိုင်း: เกาะพะงัน, RTGS: Ko Pha-ngan, အသံထွက် [kɔ̀ʔ pʰā.ŋān])(Thai: เกาะพะงัน, RTGS: Ko Pha-ngan, pronounced [kɔ̀ʔ pʰā.ŋān]) သည် ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ ဆူရတ်ဌာနီခရိုင်၊ ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့တွင်ရှိသော ကျွန်းတခုဖြစ်သည်။ ကော့ပငန်းကျွန်းရှိ ဟာ့ဒင်းကမ်းခြေတွင် လပြည့်ညတိုင်း ကျင်းပသည့် လပြည့်ပါတီ(Full moon Party)ကြောင့် လူသိများသည်။ ၎င်းကျွန်း၏ ညီအမ ကျွန်းနှစ်ခုမှာ တောင်ဘက်ရှိ ကော့စမွီကျွန်းနှင့် မြောက်ဘက်ရှိ ကော့တောင်ကျွန်းငယ်ကလေးတို့ဖြစ်သည်။
ခန့်မှန်းအကျယ်အဝန်း ၄၀ ကီလိုမီတာ (ပျမ်းမျှလမ်းလျှောက်ချိန် ခန့်မှန်းချေ ၁၀နာရီခန့်)
ကော့စမွီကျွန်းမှ ၁၅ ကီလိုမီတာခန့်ကွာဝေး
အမြင့်ဆုံးတောင်: ခေါင်လ၊ ၆၃၀မီတာ
Ko Pha-ngan or Koh Pha-ngan
ကိုဩဒိနိတ်: Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:ISO 3166/data/TH' not found. 9°43′0″N 100°0′0″E﻿ / ﻿9.71667°N 100.00000°E﻿ / 9.71667; 100.00000
၁၂၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၄၈ စတုရန်းမိုင်)
၅.၂ နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ကျောင်းများ
၅.၅ အလယ်တန်းအောက် ကျောင်း
ကော့ပငန်းကျွန်းအမည်မှာ ထိုင်းတောင်ပိုင်းသုံး စကားလုံးဖြစ်သည့် ငန်း မှ ဆင်းသက်လာပြီး "သဲတန်း"ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ၎င်းကျွန်းပေါ်တွင် သဲသောင်တန်းများစွာရှိသည်။ ထိုင်းဘုရင်များ၏ အကြိုက်ဆုံးဒေသဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ကြာမြင့်ပြီးဖြစ်သည်။ ဥပမာအနေဖြင့် ရာမ ၅ သို့မဟုတ် ချူလာလောင်ကွန်းမင်း၏ နန်းသက်တလျှောက်တွင် ကော့ပငန်းကျွန်းသို့ ၁၄ကြိမ်တိုင်အောင်လည်ပတ်ခဲ့ဖူးသည်။ ‌၁၉၇၇ခုနှစ် ကော့စမွီကျွန်းတွင် တွေ့ရှိရသည့် ဒေါင်ဆန်ယဉ်ကျေးမှုအမွေဖြစ်သည့် ကြေးစည်သည် ကော့စမွီကျွန်း၊ ကော့ပငန်းကျွန်းများနှင့် အခြား ကျွန်းများတွင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ခန့်ကတည်းက လူများနေထိုင်ခဲ့သည်ဆိုသည့် ခိုင်မာသော သက်သေအထောက်အထားများပင်ဖြစ်သည်။ မလေးရှားကျွန်ဆွယ်မှ လှေများဖြင့် ခရီးထွက်လာသည့် ပင်လယ်ပျော်များ(Semung, and Proto-Malay)သည် ကော့ပငန်းကျွန်းတွင် စတင်နေထိုင်ခဲ့သည် ပထမဆုံးသောလူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်ဟူ၍ သမိုင်းပညာရှင်အချို့နှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသီများ ယုံကြည်ကြသည်။ လွန်ခဲ့သည့်ရာစုနှစ်အတွင်း ကျွန်း၏ လူဦး ရေသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးများလာခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်သံဖြူတူးဖော်ခြင်းသည်စီးပွားရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်သတ္ထုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်ယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းအား ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါ ကျွန်းသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်အဓိကနေရာဖြစ်သည်။ ဒေသဆိုင်ရာစီးပွားရေးအတွက်ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်အုန်းသီးစိုက်ပျိုးခြင်းသည်လည်း အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်း၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ကြောင့် နေထိုင်သူများသည် ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်နေထိုင်ကြသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ကျွန်းပေါ်ရှိ တောင်များအတွင်းသို့ လူများအပေါက်ရောက်နိုင်ချေ။ ကျွန်း၏တဝက်ခန့်အား အမျိုးသားဥယျာဉ်အဖြစ် ထားရှိပြီး ကော့ပငန်း၏ ၈၀ကီလိုမီတာစကွဲအထက်သည် မပျက်စီးသေးသည့် သစ်တောကြီးများနှင့် မတူကွဲပြားသည့် အပင်နှင့် သတ္တဝါများပေါက်ရောက်နေထိုင်ကြသည်။ ၎င်းကျွန်းအား နတ်ကြီးသောကျွန်းတစ်ကျွန်းအဖြစ်လည်း မှတ်ယူကြပြီး ကျွန်‌းပေါ်တွင် ဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်းများ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာနေရာများ၊ရေပူစမ်းများ နှင့် တရားစခန်းများအားလည်းတွေ့ရသည်။
ဖိုင်:Exploring the island on mopeds.jpg
ခရီးသွားရန် မော်တော်ဆိုင်ကယ်အား အဓိကအသုံးပြုသည်။
ဆူရတ်ဌာနီခရိုင်တွင်ရှိသော လှေဆိပ် ၃ခု မှလည်းကောင်း ချွန်ပေါ်မြို့တွင်ရှိသော လှေဆိပ်တခုမှလည်းကောင်း ရေယာဉ်များဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်နိုင်သည်။ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ ကော့စမွီကျွန်းမှ ကူတို့လှေဖြင့်လည်း လာရောက်လည်ပတ်နိုင်သေးသည်။ (ရာဇဖယ်ရီ လှေဆိပ်သည် ကော့ပငန်းကျွန်းမှ ၉ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိသည်။)
၂၀၁၂ခုနှစ်မှစတင်ပြီး ကန္နီသီ လေကြောင်းလိုင်းမှ ထိုကျွန်းပေါ်တွင် လေယာဉ်ကွင်းတည်ဆောက်နိုင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကန် လေကြောင်းလိုင်းက ၃၂ဟက်တာရှိသော မြေပြင်တွင် နေ့စဉ် ခရီးသည် ၁၀၀၀ခန့် အားဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်နှင့် အေအာတီ ၇၂-၆၀၀ အမျိုးအစား လေယာဉ်များအသုံးပြုနိုင်သည့် ၁၀၉၅ မီတာရှည်လျားသော လေယာဉ်ပြေးလမ်းတည်ဆောက်ရန်အတွက ဘတ် သန်း၅၀၀ခန့် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုပရောဂျက်အား ကနဦးက ဘတ် သန်း ၉၀၀ ခန့် ကုန်ကျမည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ဘတ် ၂ ဘီလျံခန့် ကုန်ကျမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည့်အပြင် အခြား ကုန်ကျစရိတ်များခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေများနှင့် ရင်ဆိုင်ရခြင်း စသည့်ကိစ္စရပ်များကြောင့် ခတ္တရပ်ဆိုင်းထားရသည်၏။ 
ကော့ပငန်းကျွန်းအား ကော့တောင်ကျွန်း နှင့် အခြားကျွန်းငယ်များပေါင်း၍ ကော့ပငန်းနယ်(အမ်းဖိုး) (၁၄၂ကီလိုမီတာစကွဲ) တခုအဖြစ်ထားရှိသည်။ ထိုနယ်အား နယ်အငယ် ၃ခုထပ်မံခွဲထားသေးပြီး ၎င်းတို့အား အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေ ၁၇ ခု ထပ်မံခွဲထားသေးသည်။
ထိုနယ်အတွင်း ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေခွဲ ၄ခုရှိသည်။ ကော့ပငန်း သည် ကော့ပငန်းနှင့် ဘန့်သိုက် နယ်မြေခွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတွင် ပါဝင်သည်။ ဖက်ပငန်းသည် ကော့ပငန်းနယ်မြေခွဲ၏ အစိတ်အပိုင်းတွင် ပါဝင်သည်။ ဘန်းသိုက်သည် ဘန်းသိုက်နယ်မြေခွဲ၏ အစိတ်အပိုင်းတွင်ပါဝင်သည်။
ရှေးက ဤကျွန်းအား ကော့စမွေခရိုင်မှ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၇၀ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် နယ်မြေငယ်အဖြစ် ခွဲထွက်ခဲ့ပြီး ကော့ငငန်းနှင့် ဘန်းသိုက်တို့ ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၂ရက်တွင် နယ်တစ်ခုဖြစ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကော့တောင် နယ်ခွဲအား ၁၉၈၂ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၅ရက်တွင် ကော့ငန်းနယ်မြေခွဲ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှုအဆင့်မှ ခွဲထုတ်လာနိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ ကျွန်းသည်တစ်နှစ်လျှင် လာရောက်လည်ပတ်သူပေါင်း ၄၅၈၀၀၀ခန့် လက်ခံရရှိသည်။ ထိုဧည့်သည်များနှင့်ကျွန်းသားများသည် တစ်နှစ်လျှင်အမှိုက်တန်ချိန် ၇,၃၀၀ ခန့်ထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းအကျိုးဆက်ကြောင့် မသန့်ရှင်းသောစွန့်ပစ်ရေများ နှင့် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသော သန္တာကျောက်တန်းများအရောင်ညှိုးနွမ်းခြင်း ပြဿနာများဖြစ်လာသည်။
ကျွန်းပေါ်ရှိကလေးများအတွက် ထိုင်းအစိုးရကျောင်း ၁၀ကျောင်းခန့်ရှိသည်။ ပညာရေးမှာ အလကားဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်ပါက ထိုင်းစကားရေးတတ်ရန်နှင့် ပြောတတ်ရန်လိုသည်။
Learning Tree Nursery & Kindergarten ကို ၂ နှစ်မှ ၇ နှစ်အရွယ်ကလေးများအတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
သီရိပညာ(Si Ri Panya) နိုင်ငံတကာကျောင်းအား အသက် ၅နှစ်မှ ၁၁အရွယ်ကလေးများအတွက် ပညာသင်ပေးနိုင်ပြီး ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
Wisdom College Tutorial School သည် ကိန်းဘရစ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတိုင်းသင်ကြားပေးပြီး အသက် ၁၁မှ ၁၄နှစ်အရွယ်ကလေးများ တတ်ရောက်သင်ကြားနိုင်သည်။ ဤကျောင်းသည်ကလေးများ၏ပညာရေးတိုးတက်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုအကြားမျှတမှုရှိစေရန ်ပြင်ပသင်ကြားမှုများကိုလည်းပြုလုပ်သည်။
↑ "th:ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง การเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ" (in Thai) (PDF) (14 Sep 2000). Royal Gazette 117 (พิเศษ 94 ง): 2.
↑ About Koh Pha-ngan။ 22 April 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 July 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ LOMPRAYAH ROUTE။9April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Koh Phangan airport developer seeks loans"၊ Bangkok Post၊5September 2016။6September 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကော့ပငန်းကျွန်း&oldid=698435" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။